RAVALOMANANA MARC IHANY NO FANALAHIDIN’NY KRIZY – MyDago.com aime Madagascar
RAVALOMANANA MARC IHANY NO FANALAHIDIN’NY KRIZY
Nalaza tato ato indray ity resaka fifidianana ity indrindra fa taorian’ny nilazan-dRajoelina fa ny fifidianana solombavam-bahoaka no alefa alohan’ny filoham-pirenenana. Samy nanana ny heviny avokoa ireo mpanao politika, na ny mpanaram-baovao politika eto amintsika. Ireo mpiara misôsy amin’ny mpanongam-panjakana no nampiakam-peo teny anivon’ny haino amanjery maro samihafa teny. Nizara roa izy ireo ka ireo tena akaiky ary niaraka nisaika hatramin’izao no nanaraka ambokony izay nambarany ny lehiben’ny mpanongam-panjakana fa mety ny hanaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka aloha. Ny sasany izay efa tsy nitovy hevitra aminy intsony ary nilaza fa hirotsaka ho kandida dia nandrangaranga fa tokony ho tazonina ny fifidianana filoham-pirenena. Ho an’ny mpanaram-baovao politika dia mahatsapa fa efa mifanipaka toy ny valala an-karona izy ireo satria samy miady ny ho lohany avokoa. Tsy mankasitraka an-dRajoelina mantsy ny ankamaroan’izy ireo fa nanohana azy fotsiny mba hanalana ny filoha Ravalomanana Marc teo amin’ny fitondrana mba ahazoana seza. Na nirotsaka na tsy nirotsaka noho izany Rajoelina dia azo hinoana fa tsy maintsy hanao kandida ireo olona tsy nankasitraka azy ireo. Maika dia maika tokoa ireto mpanongam-panjakana ireto hanatontosa fifidianana. Ekena fa ny rehetra dia samy milaza fa ny fifidianana no làlan-tokana hirosoana amin’ny famahana ny krizy eto amintsika. Raha ny zavamisy ankehitriny anefa no jerena dia mbola sarotra ny hanaovana izany fifidianana demokratika, mangarahara, eken’ny rehetra izany. Misy ny fepetra ara tekinika sy ara-politika takiana amin’izany vao afaka miroso isika. Ny lafiny ara-teknika izay antony nanemoran’ny Cenit ny datim-pifidianana, dia mbola maro no tsy milamina eo amin’ny lisim-pifidianana eny anivon’ny fokontany, ny fanazavana amin’ny vahoaka ny biletà tokana ampiasaina ihany koa mbola sarotra satria mila fotoana maromaro, ny vola ho entimanana mbola tsy ampy sns. Ny lafiny politika dia mbola tsymisy ny fitoniana politika eto amintsika. Tafiditra ao anatin’ny fitoniana ny voalazan’ny tondrozotra dia ny famerenana ny sesi-tany politika any ivelany anisan’izany ny filoha Ravalomanana Marc. Ny fanokafana ireo radio nakatona. Ny famoahana ireo gadra politika mbola any am-ponja ary ny fanaovana ny famotsoran-keloka. Raha tsy tanteraka ireo dia mbola sarotra ny hinoana fa hisy fifidianana ho vanona eto Madagasikara. Ny tsapa anefa dia Rajoelina sy ny forongony dia matahotra mafy ny hampihatra ireo indrindra ny famerenana ny filoha Ravalomanana Marc eto an-tanindrazany. Mitady ny fomba rehetra hisakanana izany zandrikely, ka mieritreritra ny hanitatra ny tetezamita hatrany. Ny vahoaka Malagasy anefa efa miaina ao anatin’ny fahasahiranana lalina vokatry ny tsy fahaiza mitantana. N’inon’inona ataon’ny mpanongam-panjakana eto, na hanao amboletra io fifidiana io izy ireo dia tsy misy vahaolana afa tsy ny famerenana ny filoha Ravalomanana Marc ihany satria any aminy ny fanalahidin’ny krizy. Ny filazana aza fa aorian’ny fifidianana vao afaka mody dia miteraka krizy vaovao indray ary hihamafy kokoa satria misy olom-pirenena noverezin-jo eto Madagasikara.
NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IHANY NO HAMAHA NY KRIZY
Auteur Solo Razafy*Publié le 6 février 2013 Catégories Politique
8 pensées sur “RAVALOMANANA MARC IHANY NO FANALAHIDIN’NY KRIZY”
Averina foana Sao mbola misy Tsy mahazo, fa Tsy misy fifidianana eken’ny rehetra izany eo raha Tsy tonga ary voaaro sy miaina ao anaty fandrimpahalemana ny filoha Marc RAVALOMANANA . Torak’izany koa ny fisokafan’ireo aino aman-jery nakatona, sy ny fivoahan’ny Garda politique.
Ary mila hetsika ny Malagasy @ Izany fa Tsy misy mana hilatsaka Avy any an-danitra akory eo hetsiky ny Zana’i Dada.
Requête d’Andry Rajoelina rejetée
Fa inona no tokony hidirana @’ izay adim-poza any ry zareo???
nisy nanatrika angaha ny FIFANARAHAn’ireo tany aloha tany???
tsy izay hivoahana no asiana sira fa resaka tsy musy loany sy odiny ary no handrebirebena olona eto.
Izay hifanarahany any hifanarahany , efa voky daholo ireo, efa niara-nipetsapetsa tao daholo ka izay
hifanosehany any. Inona ary ity???????heveriko fa hoe mba i Dada no nanao fanambarana hay resa-
poza ary no handaniana andro indray??????
6 février 2013 à 18 h 24 min
Ny vao2 endrasanay izao dia rahoviana i dada no miverina????
ny Gadra , ny haino aman-jery ,ny hialan’i domelina eo sns .RAHOVIANA???
Ekena fa hiemotra ilay date-pifidianana fa midika ve izany fa hijanona eo i domelina hamita ilay
5 taonany???ianareo mpanao kisonia no hipetrahan’ilay fanontaniana eto.
2014 na 2015 i domelina dia mbola ho eo, raha izay no tianao ho fantarina ranavalona !!
Raha manana possibilité ianao dia jereo ato, fa ny gasy hono tsy matahotra an’izany fahafatesana izany !
Midika izany fa tsy ny fahatahorana no tsy hivoahany avy ao anaty tamboho, fa zavatra hafa !!
Raha mbola fy koa ny fiaraha-misaosy amin’ny marasily sy bôdegany mpanongam-panjakàna, raha mbola ny karana no hianteherana amin’ny fihidiram-bola ho an’ny tokatrano, dia tsy hisy malagasy iray hitsangana eo, hanavotra an’io tany io !!
6 février 2013 à 22 h 48 min
Dia inona no tokony hibitabitahana rah hiemotra ilay fifidianana ????
Amiko dia mbola FANATSIANA REZATRA NY SEZAN’i domelina ihany
ny fanemorana ilay daty, omena fotoana lava ihany izy HINANANY SY HANITSAHANY an-tenda
ny Gasy, hanomezana vahana ny mpanjanaka.Mba misaina sy mandinika ve ilay olona e?????
Dia inona no fepetra raisina manoloana izany fanapahan-kevitra izany hono ho an’i mpitarika???
sa vitan’ny kabary dia samy miala????
6 février 2013 à 22 h 50 min
« FAMANTSIANA » no tiako sotana , azafady.
Iza ity lazainao fa mibitaka sy mitsinjaka ê ? Sao diam-bazaha ?? Mdr !!!
Précédent Article précédent : HILARION RARISON : FENO NY FEPETRA TSY AHAFAHANA MIATRIKA FIFIDIANANA SATRIA TSY VOAHAJA NY TONDROZOTRA
Suivant Article suivant : RAKOTONOMENJANAHARY JEAN ERNEST : TSY TOKONY HIKARAKARA FIFIDIANANA RAJOELINA